Ikhaya elipholileyo kude neKhaya! - I-Airbnb
Ikhaya elipholileyo kude neKhaya!
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRay & Barb
URay & Barb yi-Superhost
Yonwabela i-Upper Peninsula~ Indawo yethu ikwingingqi ezolileyo kakhulu ejongene neLake Antoine~ iitreyile ze-ORV kunye nePine Mountain Ski Resort- kulwandle oludumileyo lokuloba!Ikhaya libucala kundwendwe. Ibhedi ye-Queen, i-1 yokuhlambela, indawo yokuhlala ekumgangatho ophantsi (indawo yokuhamba ngaphandle); ikhitshi eligcweleyo kunye nendawo yokuhlala kwinqanaba eliphezulu.Ikhaya lethu linabantu aba-2 iSauna ye-infrared, ibha, iwasha kunye nesomisi, ikhitshi eligcweleyo kunye neendawo zokupaka igaraji.Ilungele abantu abashishini, izibini, iintsapho ezincinci. Ibhedi yosuku iyafumaneka, kodwa igumbi alikagqitywa.
Le ndlu yakhiwa nguRay kwaye likhaya lethu labucala. Sizintaka zekhephu kunye nee-RV unyaka wonke, ngoko sigqibe ekubeni siyirente le ndlu njenge-airbnb.**Nceda uqaphele, likhaya lethu ayisiyondawo yezintso. **Sineefoto nezinto zethu zobuqu ezisahleli endlini.Yindawo ye-adventure yangaphandle, enokuloba, ukukhwela intaba, ukuhamba ngekhephu, ukutyibiliza, i-orv, njl.njl. Amakhulu eekhilomitha zeendlela.
4.87 · Izimvo eziyi-152
Ummelwane luluntu oluzolileyo lwabanini bamakhaya. Sikufutshane kakhulu neendlela ezininzi ze-ORV kunye neendledlana zeemoto zekhephu.Ungaqhuba izitrato kwiNtaba yeIron ukuze ufikelele kumakhulu eekhilomitha zeendlela.
Umbuki zindwendwe ngu- Ray & Barb
Siyafikeleleka ngetekisi / ngefowuni kwaye siyathanda ukunceda ukuba sinako ukuyenza indawo eyonwabisayo yeendwendwe zethu!
Nceda ukhumbule, phambi kokuba ukhethe le bnb yomoya, eli likhaya lethu. Siyaluthanda usapho lwethu noThixo kunye neefoto kwaye izinto zethu zisenjengoko ndithanda ekhayeni lam, azimiselwanga njengerenti.
Nceda ukhumbule, phambi kokuba ukhethe le bnb yomoy…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Iron Mountain